Umgcini wePariso Monzon
Igumbi elonwabisayo, elinemfihlo kunye nokuzola, kunye nosapho oluvela kule ndawo kunye ne-10 iminyaka yamava kwishishini, elizokwamkela ngokufudumeleyo
Umabonwakude, uPatio, iiBikes zokusetyenziswa, ukuFikelela kwi-Intanethi, kwigadi, ukupaka
Ndwendwela uCasa Iliana kunye neAlbe & WIFI
Singumtshato, ndisebenza kwinkampani yombane kwizidiliya njengegcisa kulawulo lwezoqoqosho kwaye abayeni bam bayingcaphephe kwifriji nakwiimo zomoya kumasipala omnye. Sikwisiko kwaye sinobubele kakhulu kwiindwendwe, kwaye siyabaxhasa naninina xa besifuna, silungiselela ...
E papashwe ngu Iliana
E papashwe ngu Ann
I-Chiang Mai, ubomi bendawo, ukupheka, phumla
Molo! Kuyandonwabisa ukudibana kwakho. Makhe ndizazise kunye nekhaya lam elihle. Igama lam nguPhaijitra. Ndineminyaka engama-40. Ndivela e-san (emantla ntshona) eThailand.Ndisemtshatweni. Ndihlala nesithandwa sam kodwa ngamanye amaxesha uhambahamba, ungumFrentshi. Unobuhlobo. Bendiphila ...
UChiang mai ()
E papashwe ngu IPhaijitra
E papashwe ngu Bunyong
E papashwe ngu Valeria
Yinyani iCambodia yichibi elikhulu
Igama lam ndinguKim kwaye ndihlala kwilali yaseChrey kunye nenkosikazi yam nabantwana abathathu. Ndingumqhubi we-tuk tuk ukuze ndikwazi ukukukhetha ngokulula kwisikhululo seenqwelomoya (akukho ntlawulo) kwaye ndikuse eAngkor Wat nakwezinye iindawo. Ilali yethu ithe cwaka, ikhuseleke kakhulu kwaye i-3km iphuma kwisixeko sase-Mina Reap esinechibi elikhulu kufutshane nendawo yokubhukuda ...
Iibhasikithi ezisetyenziselwa, Ukuhlamba iimpahla, Igadi, Ukupaka
I-Sangkat Tuek Vil, kwiPhondo le-Indian Reap ()
E papashwe ngu UKim Heak
"Indlu eyiNdlu yesibini"
Ngokuhlala kwakho eHavana, sinikezela ngamagumbi atofotofo kwigumbi lethu elikwi-Old Havana, kufutshane neendawo ezininzi zenkcubeko, ezembali kunye nezoyilo lokwakha, kunye neendawo zokutyela, ikofu kunye nemivalo; Ulufumana phi unyango lwasekhaya. Sinamagumbi amabini. Elinye lamagumbi linendawo ezimbini ...
Umabonwakude, ikhompyuter, ukuhlamba iimpahla
E papashwe ngu U-Ernesto Javier
Indlu yam ikwiZiko leMbali le-Old Havana, ineendawo ezininzi zabakhenkethi ezikujikelezile, kwisitrato sethu sineendawo zokutyela ezilungileyo kakhulu, sikufuphi neCathedral yaseHavana, iMyuziyam yoHlaziyo kunye neMalecón Habanero, kunye nezinye izinto zokhenketho. Amaxabiso am aquka ...
E papashwe ngu Clara